दार्जिलिङ्का भासीहरु नेपाली भन्न रुचाउदैनन् हाम्रो पुर्खाले कमाको “गोर्खाली” नाम किन चोर्दै छन् ? - Enepalese.com
दार्जिलिङ्का भासीहरु नेपाली भन्न रुचाउदैनन् हाम्रो पुर्खाले कमाको “गोर्खाली” नाम किन चोर्दै छन् ?
इनेप्लिज २०७४ असार ९ गते १८:५० मा प्रकाशित
थाहा छैन मैले यहाँ यस्तो भन्न हुन्छ कि हुन्न…
सबैको अा आफ्नै सोच हुन्छ तर भुल्चुक भए माफी पाऊ…
जसरी अहिले buddha को जन्म india मा भएको भनेर भ्रम फैलिएको छ, पछि के थाहा GorkhaLand को कारण Gorkha पनि भारत कै कुनै ठाउँ हो, त्यो सबै वीर गोर्खालीहरु भारती हून्, ब्रिटिश लाहुरे जती सबै भारती हो भनेर भ्रम नफैलाउलान र? दार्जिलिङ्का नेपाली भासीहरु जब आफुले आफुलाई नेपाली भन्न रुचाउदैनन् भने हाम्रो पुर्खाले कमाको शान “गोर्खाली” नाम किन चोर्दै छन् ? आफु नेपाली चाँही होइन रे अनि नाम चाँही गोर्खाली भन्न पर्नी रे अनि “GorkhaLand” पनि चाहिने ?उनिहरु नेपाली भासी हून् , नेपाली होइनन् ! उनिहरुलाई आफ्नो छुटै प्रदेश् चाहिने हो भने अरु नाम राखुन् न किन GorkhaLand नै राख्नुपर्‍यो? अरु शब्दहरु सक्यो र?